कुख्यात गैंडा तस्कर सार्वजनिक – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
कुख्यात गैंडा तस्कर सार्वजनिक
२०७१ फाल्गुन ५, मंगलवार ०१:४९ गते
कसरा । गैंडाका काल मानिएका कुख्यात सिकारी राजकुमार चेपाङ यस पटक पक्राउ परे । निकुञ्ज प्रशासन १० वर्षदेखि उनको खोजीमा लागेको थियो । उनी इन्टरपोलको सहयोगमा मलेसियाबाट पक्राउ पर्दा संरक्षणकर्मीहरुले सन्तोषको निकै लामो स्वास फेरेका छन् । विगतमा गैंडा भसक्कै मर्दा राजकुमारको हात रहेको देखिएको छ ।
विसं २०६० सालको चैत्र १२ गते निकुञ्जको प्रतिवादी कायम भएका राजकुमार त्यहाँको हिरासतमा भने यही माघ २६ गते आएका हुन् । यो बीचमा उनलाई पक्राउ गर्न ठूलो कसरत चल्यो । नेपालबाट मलेसिया पुगेका राजकुमारलाई पक्राउ गर्न इन्टरपोलले रेड कर्नर नोटिस जारी ग¥यो । गत वर्षको कात्तिकमा रेड कर्नर नोटिस जारी भएको थियो । यही माघ १६ मा उनी मलेसियामा समातिए ।
विसं. २०५८ साल गैंडा सिकार उत्कर्षमा थियो । त्यो बेला वर्षमा ३७ वटासम्म गैंडा मारिन्थे । राजकुमार सोही बेलामा सक्रिय हुने गरेको निकुञ्जको भनाइ छ । उनी निस्क्रिय हुन थालेपछि गैंडा सिकार नियन्त्रणमा आएको छ । विसं. २०६७ सालयता वर्षमा एकमात्र गैंडा मर्ने गरेको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले जानकारी दिएको छ । राजकुमारले ०६७ सालमा नेपाल छाडेका थिए ।
‘मार्न सिकाउने अरुहरु नै थिए । को को थिए खै अहिले नै के भनौं तर हामी चेपाङ सोझो र सीधा जाति । मार्न हिँड भनेपछि काममा लागियो । गर्दै जाँदा बानी नै प¥यो’ राजकुमारले भने । अहिले ३१ वर्षका भएका राजकुमारको घर चितवनको पहाडी गाविस कोराकको कालीखोला हो । जंगलबीचको उनको गाउँमा चेपाङकै बसोबास छ ।
विसं. २०६० सालमा उनीविरुद्ध निकुञ्जमा मुद्दा दर्ता हुनुभन्दा पहिलेबाटै राजकुमार गैंडा शिकारमा सक्रिय थिए । नाम बदलेर विस २०६७ सालमा फर्जी नागरिकता र राहदानी बनाएर मलेसिया लाग्नुअघि उनले धेरै गैंडा मारे । धेरैलाई यो काममा संलग्न गराए । ‘मैले नै गोली हानेर २० वटा गैंडा मारें । त्यस्तै गोली लागेर अरु पाँच गैंडा घाइते भए’ राजकुमारले भने ।
यीबाहेक अरुले मारेका थप दुईवटा गैंडाको खाग पनि आफूले बेचेको उनले बताए । राजकुमार विरुद्ध चितवन निकुञ्जमा १५ वटा मुद्दा छन् । जसमध्ये छवटा मुद्दा फैसला भएका छन् । फैसला भएका सबै छवटा मुद्दामा उनलाई १५ वर्ष कैद र एक लाख रुपैयाँ जरिवाना भएको छ । यो कैद र जरिवाना वन्यजन्तु अपराधमा हुने सबैभन्दा धेरै हो ।
नेपाल र भारतमा मात्रै पाइने एकसिंगे गैंडा लोप हुने अवस्थामा पुगेको दुर्लभ जनावर हो । यसको नाकमा हुने सिंग जस्तो बस्तु खागका लागि तस्करहरुले यसको सिकार गर्छन् । अवैध रुपमा बेचबिखन हुँदै चीनमा जाने खागका लागि तस्करहरुले गैंडा मार्न निकुञ्ज आसपासका सोझा सर्वसाधरणलाई बढी उपयोग गर्ने गरेको देखिन्छ ।
‘देश विदेशमा सक्रिय खाग कारोबारहरु केही वर्षयता धमाधम समातिन थालेपछि राजकुमार पनि गिरफ्तार हुन सकेको हो’ आइतबार कसरामा आयोजित कार्यक्रममा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका सहायक संरक्षण अधिकृत विष्णु थपलियाले भने । गैंडा सिकार गर्दा जे जसरी पैसा कमाएको थिए त्यसरी नै गुमाए भन्छन् राजकुमार ।
‘यत्रो गैंडा मारेपछि पैसा कमाएको छ होला भन्ने लाग्दो हो । हो केही कमाएँ, तर जसरी कमाएँ त्यसरी नै गुमाएँ पनि’ पत्रकारहरुसँग राजकुमारले भने । गैंडा मार्नेहरुको धेरै खोजी हुने र बच्नका लागि लुक्दै हिँड्दा अनावश्यक रुपमा पैसा खर्च हुने गरेको उनले बताए । ‘त्यसैले पैसा जोगिँदै जोगिएन उल्टै बद्नाम भयो । अहिले समातिए अब एकदम ढुक्क छु’ राजकुमारले भने ।
निकुञ्जले खोज्न थालेपछि राजकुमार नाम ढाँट्दै पोखरा, काठमाडौं, धरान बस्ने गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको सहायक संरक्षण अधिकृत थपलिायाले बताए । निकुञ्जको गिरफ्तारबाट उनी तीनपटक जोगिएका थिए । ०६१ सालमा घरमै समाउन खोज्दा उनी फुत्केका थिए । त्यस्तै ०६४ सालमा मेघौली र ०६५ सालमा पूर्वी चितवनको निकुञ्जभित्र अमृते भन्ने ठाउँबाट पनि उनी उम्किएका थिए ।
विकट गाउँ कोराकका राजकुमारले विसं. २०६७ साल जेठ १० गते गोरखाबाट नागरिकता झिकेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । उनले भक्तराज गिरीको नामबाट गोरखाबाट नागरिकता लिएसँगै काठमाडौं पराराष्ट्र मन्त्रालयबाट ०६७ सालकै जेठ २० मा राहदानी निकालेको पक्राउमा संलग्न केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोका डिएसपी सविन प्रधानले बताए ।
राहदानी लिएपछि उनी ०६७ सालको असोज २६ मा मलेसिया गएका हुन् । सोही वर्षको चैत्र आठमा उनले मलेसियामा रहेको नेपाली दुतावासबाट राहदानीको प्रतिलिपि निकालेका छन् । ‘तत्कालका लागि निकुञ्जसँग सम्बन्धित अपराध ठूलो भयो । उनले नाम ढाँटेर नागरिकता लिएको विषय पनि अपराध नै हो । त्यसको पनि छानबिन हुन्छ’ डिएसपी प्रधानले भने ।
राजकुमारले नाम ढाँटेर नागरिकता लिएर विदेश गएको निकुञ्जलाई जानकारी थियो । तर गत वर्षको असोजमा उनका भान्जा पर्ने बुद्धिबहादुर चेपाङ समातिएपछि उनी मलेसिया गएको पक्का भएको निकुञ्जका सहायक संरक्षण अधिकृत थपलियाले बताए । त्यसपछि इन्टरपोलले उनीविरुद्ध रेडकर्नर नोटिस जारी ग¥यो । मलेसिया प्रहरीले वाङतिङ तेलोक सहरमा उनलाई समायो ।
नेपाल प्रहरीले वन्यजन्तु अपराधमा संलग्न नेपाली नागरिकलाई समाउन इनटरपोलमार्फत रेडकर्नर नोटिस जारी गरेको यो पहिलो घटना हो । वन्यजन्तु अपराधमा नै एकजना विदेशी इयान बेकरलाई पक्राउ गर्न पनि नेपाल प्रहरीले इनटरपोलमार्फत रेडकर्नर नोटिस जारी गरेको छ । राजकुमार गिरफ्तार भएपछि वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रणमा ठूलो सहयोग मिल्ने निकुञ्जको आशा छ ।